उपभोक्ता बजार - यो हाम्रो दैनिक जीवनमा भाग हो
हामी प्रत्येक अक्सर किराना पसल, वस्त्र र अन्य सामान जाने छ। साथै एक व्यक्ति लागि सामान्य कुरा hairdresser, फिटनेस क्लब, क्याफे, यात्रा एजेन्सीहरू को सेवा गर्न अपील गर्न यात्रा हो रूपमा। तसर्थ, हामी प्रत्येकले बजार सम्बन्ध को एक भाग खडा।
उपभोक्ता बजार के छ
यो कि खरीदार र विभिन्न सामान, सेवा र कार्यहरूको विक्रेता बीच उत्पन्न सम्बन्ध को एक सेट छ। मान्छे व्यक्तिगत खपत लागि आफ्नो विभिन्न लाभ किन्न। उपभोक्ता बजार को मुख्य उद्देश्य - यो आवश्यक छ र प्रयोगकर्ता सेवा।
उपभोक्ता बजार को वर्गीकरण
बजार फरक मैदान मा प्रकार भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ उपभोक्ता प्रस्ताव छ जो वस्तु लागि वर्गीकरण छ:
बजार उपभोक्ता सेवाहरू;
उपभोक्ता सामान बजार।
उत्तरार्द्ध खाना र गैर-खाद्य वस्तुहरूको बजार भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
बजार खाद्य उत्पादनहरु निर्माताहरु र व्यापार थप र थप नयाँ खाद्य उत्पादनहरु प्रस्ताव रूपमा, एकदम व्यापक छ। यो खण्ड खाद्यान्न विभिन्न प्रकारका अनुसार प्रकार मा subdivided छ। हामी यति मा मासु र माछा, दुग्ध, बेकरी र कन्फेक्शनरी उत्पादन, अनाज र पास्ता बजार को बजार रूपमा, निम्न मुख्य प्रकार भेद गर्न सक्नुहुन्छ, र। डी
स्वाभाविक, गैर-खाद्य उत्पादनहरु को बजार अझ थप। यो सामान एक ठूलो विविधता कारण हो। गैर-खाद्य बजार को मुख्य प्रकार - यो छ फर्नीचर, वस्त्र र जूता, मोटर, घरेलू उपकरण र कम्प्युटर उपकरण, भाँडा, गलैँचा, प्लास्टिक उत्पादन, औषधि, मोटर ईंन्धन र अधिक।
उपभोक्ता सेवा बजार आफ्नो प्रकार अनुसार वर्गीकृत गर्न सकिन्छ:
फिटनेस र खेल;
यस्तो भाडा आवास, काम, आदि रूपमा केहि फेला पार्न मद्दत,
तर सबैभन्दा प्रत्येक व्यक्ति को लागि महत्वपूर्ण एक प्रादेशिक आधारमा उपभोक्ता बजार को विभाजन छ। उदाहरणका लागि, बजार:
Obninsk, र यति मा। डी।
आखिर, हरेक कदम मा तपाईं पाउनुहुनेछ मास्को मा कि धेरै, यो बासिन्दा Stupino रूपमा पहुँचयोग्य हुने छैन।
विभिन्न क्षेत्रहरु मा बजार को संरचना विशिष्ट कारण फरक हुन सक्छ:
यस क्षेत्रमा विशिष्ट कारोबार र संगठन को उपलब्धता;
क्षेत्र जनसंख्याको सल्वेंसी को स्तर।
उदाहरणका लागि, एउटै सडक मा एक ठूलो शहर मा एक सना र फिटनेस क्लब, र सुपरमार्केट र ग्याँस स्टेशन हुन सक्छ। एउटा सानो क्षेत्रीय केन्द्र मा जबकि कुनै सौन्दर्य वा फिटनेस क्लब वा हाइपरमार्के हुन सक्छ। यो जो एउटा सानो सहरमा तिनीहरूलाई भ्रमण जाँदै छ, किनभने बुझ्ने हो? यी प्रतिष्ठानबाट आय को एक निश्चित स्तर संग मान्छे, र ठूलो शहर मा थप मान्छे को लागि डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ।
र, सायद, औसत उपभोक्ता को लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उहाँले सबै निवास आफ्नो ठाउँमा इच्छित प्राप्त गर्न सक्छन् कि छ?
उपभोक्ता बजार को पूर्वाधार किनमेल सुविधाहरु को सबै प्रकार को एक संग्रह साथै सेवा सुविधा छ।
के बजार परिवर्तनहरू असर
उपभोक्ता बजार विकास व्यापार र सेवा को कामकाज प्रतिबिम्बित गरिएको छ। आय वृद्धि बजारमा संरचनात्मक परिवर्तन गराउँछ। यो मुख्य रूप गैर-खाद्य वस्तुहरू खाना बाट उपभोक्ता मांग मा पारी प्रतिबिम्बित गरिएको छ। थप निर्माण सामाग्री, फोन, पाटी, घर उपकरण, जूता, वस्त्र, फर्नीचर, आभूषण टी किन्न थाले। एन
विस्तार र निम्न दिशामा विकास गर्न नेटवर्क किनमेल सुविधाहरु:
ठूलो ढाँचामा खुद्रा सुविधाहरु खुलेको छ। यो सुपर र hypermarkets। तिनीहरूलाई मा तपाईंलाई आवश्यक लगभग सबै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
संगठन पसलहरूमा पैदल दूरी। तिनीहरूले पहिलो त्यागेर भवनहरु मा, घर भवन को फर्श मा खुला छन्।
व्यापार र सेवा को संयोजन। सपिङ्ग सेन्टर खुला। एक व्यापार रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, र रेस्टुरेन्ट, क्याफे, सिनेमाहरू, होटल, खेल र अवकाश सुविधाहरु।
कम्पनी स्टोर निर्माताहरु सम्बन्धित उत्पादनहरु, साथै अन्य निर्माताहरु बाट उत्पादनहरु को एक विस्तृत श्रृंखला को यसको दायरामा प्रस्ताव।
उपभोक्ता क्रेडिट विकास, खरीदार ठूलो-टिकट वस्तुहरू खरीद गर्न सकेन।
आधुनिक किनमेल सुविधाहरु मा रूपान्तरण बजार पार। यो किसान सीधा बजार मा आफ्नो उत्पादनहरु बेच्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।
को मास्को क्षेत्रमा उपभोक्ता बजार र सेवा को मंत्रालय मा लगे व्यापार, सेवा र सार्वजनिक खानपान प्रतिष्ठानबाट को क्षेत्र को विनियमन। आफ्नो नियन्त्रण को स्कोप अन्त्येष्टि सेवाहरू, बिक्री रक्सी को, लटरी बिक्री, थोक व्यापार, उपभोक्ता सेवाहरूको प्रावधान समावेश पनि भित्र।
यो नियन्त्रण सामान संग बजार को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संतृप्ति, मूल्य स्थिरता, आदि प्रवर्द्धन गर्न, व्यापार को स्तर वृद्धि गर्न नै उद्देश्य सेट छ ..
सबै त अस्थिर हुँदा कसरी, विकासकर्ता विश्वास गर्ने?
खाना र पेय मा पाठ्यक्रम। रेस्टुरेन्ट र क्याफे लागि परिसर अवलोकन
कसरी छाप भर्न? मुद्रण लागि टिकट मसी
पट्टियाँ हिउँ: लाभ, किसिम
को Uglich जलाशय मा आराम र माछा मार्ने। फोटो र समीक्षा
Afkos Grammos विलासिता संग्रह बुटिक होटल: फोटो र समीक्षा
डीलरशिप सम्झौता: आधारभूत अवधारणाहरु
Leyton मिस्टर: Filmography, जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
राजनीति र शक्ति बीच जडान के हो? राजनीति र शक्ति को अवधारणा
Darasun रिसोर्ट - बाँकी र रिकभरी लागि ठूलो ठाउँ
के बाट फिरोजा गाउन लगाउन?
यो आफैलाई के फरक तरिकामा गर्न: Masking नेटवर्क
फ्रिज कैंडी CKBS 6200 डब्ल्यू: समीक्षा र फोटो
लामो तपाईं एक फूलदान मा गुलाब राख्न रूपमा? मुख्य तरिका